GRAPHENE - Quanzhou Omi Uwe Co., Ltd.
GRAPHENE, Ihe NT MKWU ND P ỌZỌ
Graphene bụ ihe ọhụrụ nke ga-agbanwe ihe anyị jiri akwa.
Kwuru na mbụ na isiokwu anyị na akwa ọhụrụ, graphene na-aga n'ihu na-akpata ọgba aghara. Na ezi ihe kpatara ya. Achọpụtara na 2004 site na ndị nyocha abụọ si Mahadum Manchester, André Geim na Konstantin Novoselov, wee nye onyinye Nobel maka Physics na 2010, ihe ọhụrụ a na-enwetụbeghị ụdị ya nwere ọtụtụ atụmatụ pụrụ iche.
N'iwere ụdị nke carbon carbon atom nke edoziri n'ụkpụrụ mmanụ a honeyụ, graphene na-abịa n'ụdị dị ọcha, na-enweghị mgbakwunye ma ọ bụ kemịkal. Haziri na nke a na-ekekọta ọnụ, nke dị larịị na nke nwere ike ịnwe ọkụ na nke ọkụ na nke eletriki na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nwa akwukwo maka njikọta textile, na mgbakwunye na ịba uru gburugburu ebe obibi, dị ka graphene na-amịkọrọ hydrocarbons na ihe ndị dị ndụ.
Enwere ike ịkọwa Graphene dị ka otu-atọ na oyi akwa nke graphite. Ọ bụ ihe nhazi ntọala nke ndị ọzọ allotropes, gụnyere graphite, unyi, carbon nanotubes na fullerenes. A pụkwara ịtụle ya dị ka nnukwu molekul aromatic na-akaghị aka, ikpe ikpe ezinụlọ nke polycarlic aromatic hydrocarbons na-adị larịị Nchọpụta Graphene amụbaala ngwa ngwa ebe ọ bụ na izizi ihe ahụ dị na 2004. E mere ka a mata nyocha site na nkọwa nkọwa nke ihe graphene mebere, usoro ya na ngwongwo ya, nke agụọla ọtụtụ iri afọ tupu mgbe ahụ. Graphene dị elu gosipụtara na ọ dị ịtụnanya na ọ dị mfe ịnọrọ iche, na-eme ka nyocha ọzọ. Andre Geim na Konstantin Novoselov na Mahadum nke Manchester nwetara Nrite Nobel na Physics na 2010 “maka nnwale ndị mebiri emebi banyere graphene nwere akụkụ abụọ.
Enwetara ákwà graphene site na mbenata kemịkal nke graphene oxide. Enwetara akwa na-eduzi akwa a na-etinye ọtụtụ mkpuchi graphene. Igwe na-eme ka ihe na-eme ka mmiri pụta ìhè gosipụtara omume omume nke akwa. Ọnụ ọgụgụ nyocha bụ isi ihe na njirimara site na voltammetry cyclic. Igwe microscopy nyocha nke electrochemical gosipụtara mmụba nke electroactivity.